Moto G10 iyo Moto G30 waa noocyada soo gelitaanka cusub ee wata batteriga weyn iyo Android 11 | Androidsis
Moto G10 iyo Moto G30 waa noocyada soo gelitaanka cusub ee wata batteriga weyn iyo Android 11
Motorola waxay dooneysay inay ku dhawaaqdo laba qalab cusub oo ka hooseeya taxanaha G, dhammaan wixii ka dambeeyay daadashada ugu yaraan mid ka mid ah qaybaha, Moto G30. Wax yar baa laga ogaa Moto G10, taleefan u yimaada kuwa u baahan is-maamul iyo qeexitaanno aad u fiican.
Moto G10 iyo Moto G30 waxaa loo soo bandhigay laba nooc oo heer-gelitaan oo cusub ah ee shirkadda, waxa togan ayaa ah in labaduba ay rakibaan nooca ugu dambeeya ee Android. Naqshadeynta labadaba waa la daryeelay ilaa ugu badnaan si loo bixiyo ergonomiska wanaagsan, sababtaas darteed labaduba waxay sii hayaan nolosha darajada, wax u muuqday in waqti lumay.
1 Moto G10, taleefan aad u tayo badan
2 Batariga, isku xirnaanta iyo nidaamka shaqada
3 Moto G30, xiisaha bartamaha
4 Batariga, isku xirnaanta iyo nidaamka shaqada
5 Helitaanka iyo qiimaha
Moto G10, taleefan aad u tayo badan
Moto G10 waa mid ka mid ah boosteejooyinka loogu talagalay inay socdaan maalinta oo dhan, Maaddaama ay kor u qaadayso processor-ka Snapdragon 460 oo uu weheliyo qalabka wax lagu sawiro ee Adreno 610. Waxaa lagu bixiyaa hal nooc oo ah 4 GB RAM, halka keydku uu leeyahay laba, 64 iyo 128 GB oo ikhtiyaar u ah inuu ku ballaariyo qol MicroSD ah.
Shaashaddu waa 6,5-inji IPS LCD nooca caadiga ah leh HD + qaraar, heerka cusbooneysiintu waa 60 Hz iyo ilaalinta Gorilla Glass 5 kama maqna. Jirka jidhku wuxuu fadhiyaa 14%, halka gudigu qaban doono inta hartay ee 86 ah iyo muujinta naqshad biyo-gelin ah oo loogu talagalay kamaradda hore.
Waxa muhiimka ahi waa xagga sare, maadaama ay kor u fuulayaan illaa afar muraayadaha indhaha, midka ugu weyni waa 48 megapixels, kan labaadna waa 8 megapixel wide angle, labada soo hartay waa 2 megapixel macro iyo mid qoto dheer. Kaamirada hore waxay istaagtaa 8 megapixels si looga faa'iideysto sawirrada hore iyo fiidiyowyada.
Batariga, isku xirnaanta iyo nidaamka shaqada
Batariga ku jira taleefannadan ayaa loo tixgeliyaa heerka gelitaanka waa qodob muhiim ah, unuga waa 5.000 mAh wuxuuna balan qaadayaa waxqabad weyn oo udhaxeeya CPU-yada iyo batari. Kharashku wuxuu joogi doonaa 10W, oo ku filan inuu ku soo oogo wax ka badan saacad, isagoo ballanqaaday inuu socon doono in ka badan 24 saacadood isticmaalka caadiga ah.
Qeybta isku xirnaanta, Moto G10 waa aalad 4G ah, waxay ku darsaneysaa Wi-Fi 5 isku xirnaanta, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, qalabka dhageysiga dhagaha, USB-C waana Dual SIM. Akhristaha faraha ayaa gadaal ka socda, oo ku yaal astaanta taleefanka waa isku mid qaar badan oo taleefannadaada ah laga bilaabo laba sano ka hor.
Nidaamka hawlgalka Moto G10 waa Android 11, ayaa la cusbooneysiiyay nooca ugu dambeeya iyadoo astaamo badan oo la heli karo la filayo. Isku xirku wuxuu ballan qaadayaa waqti jawaab caddaalad ah oo dhaqso leh, taas oo ku dareysa badhanka marin u helka tooska ah ee Kaaliyaha Google waana IP52 la caddeeyey.
MUUQAAL 6.5-inch IPS LCD leh HD + xallinta / 60Hz heerka cusbooneysiinta / Gorilla Glass 5
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 460
Kaydinta Gudaha 64/128 GB / Waxay leedahay booska MicroSD
KAAMARKA DAR 48 megapixel f / 1.7 dareeraha ugu weyn / 8 megapixel f / 2.2 dareeraha waji ballaaran / 2 megapixel f / 2.4 macro sensor / 2 megapixel f / 2.4 sensor qoto dheer
KAAMI HOR 8 Dareeraha dareeraha
BATARY 5.000 Mah oo leh 10W load
Isku xirnaanta 4G / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C / Qalabka taleefanka lagu xiro / Dual SIM
DHIBAATOOYINKA Dib-u-hayaha akhristaha faraha / shahaadada IP52 / Badhanka Kaaliyaha Google ee gaarka ah
Qiyaasaha iyo Miisaanka 165.22 x 75.73 x 9.19 / 200 garaam
Moto G30, xiisaha bartamaha
El Moto G30 Waa mid ka mid ah labada taleefan ee ku faani doona la kulanka shuruudo kasta oo adeegsade ah, maadaama ay la socoto shaashad 6,5-inji HD + IPS LCD Max Vision ah. Heerka dib-u-cusbooneysiintu wuxuu kordhayaa 90 Hz naqshaduna waxay ku jirtaa balaastik biyo-celin maadaama ay leedahay shahaado IP52.
Horeba ugu jirtay qaabkan wuxuu doortaa processor-ka Snapdragon 662 kaas oo uu weheliyo qalabka wax lagu sawiro ee Adreno 610, waa isbeddelka 460, laakiin leh xoogaa horumar ah oo ku saabsan soo noqnoqoshada saacadda iyo waxqabadka. Waa suurtagal in lagu soo iibsado noocyada RAM ee 4 iyo 6 GB, halka keydinta hal saldhig oo ah 128 GB, laakiin sidoo kale waxay ku dareysaa booska MicroSD illaa 512 GB.
Kaamirada ugu weyn waa 64-megapixel Quad Pixel, ta labaadna waa 8-megapixel ballaaran-xagal ah, midda saddexaadna waa 2-megapixel macro, kan afraadna waa 2-megapixel caawiye qoto dheer. Dareeraha hore wuxuu gaaraa 13 megapixels oo wuxuu duubaa fiidiyow buuxa HD, sameynta sawir tayo sare leh.
El Moto G30 waxaa ku jira batari 5.000 Mah ah taas oo ku filan in lagu awoodo wax ka badan 24 saacadood iyada oo aan lacag laga qaadin, waxa ugu fiican ayaa ah in qalabku helayo lacag dhan 15W. Si aad uga dalbato 0 illaa 100 waxay qaadataa qiyaastii saacad iyo toban daqiiqo, halka lagugula talinayo inaad lacag ka saarto 20%.
Waxay noqoneysaa terminaal ka hooseeya 4G / LTE network, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C oo lagu dalacayo, 3,5mm headphone jack iyo hybrid DUal SIM. Akhristaha faraha ayaa gadaal ka socda, iyada oo leh badhan dhinaca si loo furo Kaaliyaha Google. Waxay la imaaneysaa shahaadada IP52 si loo celiyo biyaha.
Sida Moto G10, Moto G30 wuxuu ka bilaabmaa Android 11 nidaamka qalliinka, lakabka ayaa sii ahaan doona MyUX waxaana jira codsiyo badan oo uu ku yimaado. Waxay la timid balastarka loogu talagalay bisha Janaayo iyo dhammaan astaamaha nooca kow iyo tobnaad ee nidaamka Google.
MUUQAAL 6.5-inch HD + IPS LCD Max Vision oo leh 1.600 x 720 xalka pixel / heerka cusbooneysiinta 90 Hz (Qiyaasta: 20: 9)
Kaydinta Gudaha 128 GB / Waxay leedahay booska MicroSD ee taageera 512 GB
KAAMARKA DAR 64 MP Quad Pixel f / 1.7 dareeraha ugu weyn / 8 megapixel f / 2.2 dareeraha waji ballaaran / 2 megapixel f / 2.4 macro sensor / 2 megapixel f / 2.4 dareeraha qoto dheer / HDR
KAAMI HOR 13 Dareeraha dareeraha
Isku xirnaanta 4G / WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / USB-C / Dhageysiga madaxa / Hybrid Dual SIM
Moto G10 wuxuu ku yimaadaa laba nooc, ikhtiyaarka aasaasiga ah ee 4/64 GB Waxay ku kacaysaa qiyaastii 159 euro, halka nooca 4/128 Gb uusan shaaca ka qaadin qiimaheeda, laakiin haddii la sii deyn doono Febraayo 17. Midabada la heli karo ee ay ku timaaddo waa cawl iyo caddaan, kii ugu dambeeyay ee daabacad gaar ah.
El Moto G30 sidoo kale wuxuu yeelan doonaa laba nooc, inkasta oo ay beddeli doonto RAM, maaddaama qaabka 4/128 GB uu imaan doono Spain dhammaadka Maarso ee 219 euro midabyo madow iyo guduud ah. Qaabka 6/128 GB xilligan qiimaha lama yaqaan, in kasta oo uu hubaal sii kordhin doono qiyaastii 20/30 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Moto G10 iyo Moto G30 waa noocyada soo gelitaanka cusub ee wata batteriga weyn iyo Android 11
Google wuxuu ku shaqeeyaa qaabka "hal gacan" ee Android 12
Android 12 waxay heli doontaa isbedelada waaweyn ee isku xirnaanta iyada oo qayb ka ah Qalabka Naqshadeynta XIGTA